ဤရွေ့ကား Mediatek P60 ၏အန္တာရယ်ရှိသည့်ရလဒ်များဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Android ၏အလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးတွင်ရည်ရွယ်ထားသည်။ Androidsis
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ MediaTek, ပရိုဆက်ဆာများနှင့် semiconductors များထုတ်လုပ်အထူးပြု, အဆက်မပြတ်, Qualcomm နှင့်အတူတန်းတူအပေါ်အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည့် Xiaomi, Motorola နှင့်အခြားစမတ်ဖုန်းများထုတ်လုပ်သူများက၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာများရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဈေးကွက်တွင်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ထိုသို့မှန်ပေမယ့် Mediatek သည်ယနေ့လူကြိုက်များသည်, high-end chipsets ကဏ္inတွင်အလယ်အလတ်တန်းစားအတိုင်းအတာများများစားစားမရှိသော်လည်း high-end chipsets ကဏ္inတွင်မူနောက်ကျကျန်ခဲ့သည်မှာ Ge60Bench Benchmark ကြောင့်အချို့အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည့် PXNUMX. ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
ဒီအခြေခံစံနှုန်းကထုတ်ဝေတဲ့ရလဒ်တွေအရ, Mediatek P60 သည် Snapdragon 660 ၏အားကြီးသောပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်အလားတူ clock frequency နှင့်အတူတူပင် cores အရေအတွက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းရှစ်ခုကို 1.99GHz အမြန်နှုန်းကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးနောက်ဆုံးတွင် 2GHz တွင်အတိုချုပ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏အမြန်နှုန်းအတွက် SD660 နှင့်သာမက GeekBench တွင်ရရှိသောရမှတ်များနှင့်လည်းဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်အဓိကတစ်ခုတည်းတွင်ရမှတ် ၁,၀၂၄ ရရှိခဲ့ပြီးနှင့်ပေါင်းစုံနေရာတွင် ၅,၈၇၁ မှတ်နီးပါး 1.524 နှင့်ညီမျှသည်။ အသီးသီး Qualcomm ထံမှ SoC ရသည့် 5.871 ။
စမ်းသပ်မှုအရ၎င်းသည် RAM 3.787MB (4GB) နှင့် Android 8.1 Oreo နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်းထောက်ပြသည်။နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်း ... ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်မြင့်မားသောအလယ်အလတ်တန်းစားကိုရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းအချက်နှစ်ချက်နှင့်လွယ်ကူစွာသဟဇာတဖြစ်နိုင်သော်လည်း RAM အတွက်မူ ပို၍ များပြားသော ။
nicknamed ဖြစ်သော၎င်း၏အမည်ကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည် MTK P60 MWC သရုပ်ပြသောအတော်လေးစပ်စုသောအရာ ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်၎င်းကို Mediatek ရပ်ကွက်တွင်တင်ဆက်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်နေစေသည်သို့မဟုတ်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါက။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုချက်အချို့သို့မဟုတ်သတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဤရွေ့ကား Mediatek P60, အန်းဒရွိုက်၏အထက်အလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးကိုရည်ရွယ်လိမ့်မည်ဟုချစ်ပ်၏ filtered ရလဒ်များဖြစ်ကြသည်